Google na agbakwunye oru ohuru iji kporie akwukwo gi | Akụkọ akụrụngwa
Ruben gallardo | | ndị na-agụ akwụkwọ
Na mbido afọ a 2018, Google bidoro itinye aka na akwụkwọ ọdịyo. Ọ meghere otu ngalaba nke akwụkwọ a na-akọ na ya na ụlọ ahịa Google Play ma si otú a mee ka akwụkwọ ndị ahụ ruo ọtụtụ mmadụ. Ọnwa abụọ ka e mesịrị, Google na - agbakwunye ọrụ ọhụrụ iji nwee ọ titlesụ aha ndị a karịa.
Akwụkwọ ọdịyo nke Google na-efu ụfọdụ ndozi iji nwee ike ịnụ ụtọ aha n'oge ọ bụla. Otú ọ dị, ọ na-egosi na ịntanetị nnukwu ahụ na-eme nke ọma na ahụmịhe onye ọrụ na ọhụrụ ọrụ ị pụrụ ịnụ ụtọ ma na gam akporo na iOS.
Ihe izizi a ga-agbakwunye bụ nke a na-akpọ "Amaliteghachi Smart". Ọrụ a ga - eme emefula eri n’ihe niile ị na-anụ gbasara akụkọ ị na-etinye na ya. Ihe ọzọ bụ, mgbe ị na-eji ama iji mee nke a, ị ga-enwe ihe karịrị otu nkwụsị n'oge akụkọ (ụfọdụ oku; ụfọdụ ịdọ aka ná ntị, wdg). N'okwu a, atụmatụ ọhụrụ a ga - eji amamihe tụgharịa n'okwu ikpeazụ ị ga - anụ akụkọ ahụ.
Nke abụọ anyị ga-enwe anyị ga-enwe ndokwa ibe ma ọ bụ «Ibe edokwubara». Ọ bụkwa na inwe ike itinye akara n’amaokwu ndị kacha gosi anyị akarama n’akụkọ iji cheta ha, enweghị ọnụ. Ma pere mpe maka ndị a na-eji ebu pensụl na akwụkwọ ha mgbe niile.
Nke ato, anyi g'enwe ohere tinye Google audiobooks na ubochi nile nke anyi iji aka Google nnyemaaka - ma ọ bụ na - ege ntị. Nke ahụ bụ, onye inyeaka ga - enyere Google aka ịgụnye akwụkwọ ọdịyo dịka ihe a na - ekwu kwa ụbọchị n’ụtụtụ gị. Younwekwara ike ịbawanye ma ọ bụ belata ọsọ ọsọ iji kwado mkpa gị.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, akwụkwọ ọdịyo ị zụtara na Google Play ị nwere ike ịkekọrịta dị ka ezinụlọ. Otu mmegharị nke Apple nweelarị oge ụfọdụ n'etiti ọrụ ya nke ịkekọrịta ọdịnaya na akaụntụ ezinụlọ. Enwere ike ime nke a site na ọrụ ahụ "Ọbá akwụkwọ ezinụlọ" Library Ọbá akwụkwọ ezinụlọ ma tinye ya na mba 13, gụnyere Spain.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » ndị na-agụ akwụkwọ » Google na agbakwunye akụrụngwa ọhụụ ka ịnụ ụtọ akwụkwọ ọgụgụ gị
Teknụzụ laser a nwere ike ịmepụta ụda na enweghị ebe
Tess, nyocha mbara igwe nke ga - enyere NASA aka ịchọ ndụ na exoplanets 20.000